Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, June 14, 2009
Basanta June 15, 2009
काँचोनै भएपनि मिठो छ धाईबाजी!
अहिले सम्झदैछु मन्जुल सरको 'मृत्‍यु कविताहरु ' यो पनि तेसैमा मिसिएर बग्यो । उस्तै कञ्चन छ । एउटा तस्बिरमा घोत्लिएर त्यती चाँडो कविता लेख्नु सानो कुरो होइन।कविको संवेदनाको चरमता हो यो। कविताले यसै मानव चोलाको इतिश्री बोलेको छ । दुईमुठी खरानीको कटु यथार्थ त हो आखिर मान्छे।
दीपक जडित June 15, 2009
धाइबाजी , यो कविताको स्वाद माईसंसारमै लिएको हुँ पहिलो पल्ट । आज पुन यसमा डुब्ने अवशर मिल्यो । हरफ हरफले जीवनको मूल्य बोध गराउँछन् यसको सत्य मृत्यु हो भनेर ।
Sujan Sharma June 15, 2009
निकै राम्रो अनि मार्मिक !!
सिकारु June 15, 2009
कबिता मिठो छ धाइबा जी ।। आशा गर्छु ढिलै भएपनि आउने नतिजाले पक्कै शिखर चुम्नेछ ।
Eternal June 16, 2009
Really wonderful poem. Dherai nai marma bhayeko...jivan ko truth lai ekdum mazza le portray gariyeko.....
Bhasik avibyakti...malai ekdum maan paryo..
I wish all the best...for my Sansar's result..
कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा June 16, 2009
बस्दैन तिम्रो साँगुरो खल्तीमा,
एउटा चक्रभन्दा बढी तिमीले कतै घुम्नुछैन।
जीवनवोध गराउने मार्मिक कविता, धाइबाजीका हरेक शव्दहरु आफैमा गहन र परिपक्व भावहरुको संचार गराउछन,
मनको भित्रि पत्र छोएर तरंग उमार्छन ।
कविता निकै राम्रो लाग्यो मलाई.....माईसंसारले निक नतिजा निकालेन होला ?
बिमल गिरी June 17, 2009
यो तपाईंको भावना यथार्थ हो।
जिन्दगी आखिर एकमुठी खरानी न हो।
झुल्किनु अनी अस्ताउनु। सत्य एबम निर्बिबाद
एथार्थलाई घुमौरोपाराले पस्किनुभएकोमा धन्यवाद।
दूर्जेय चेतना June 17, 2009
मानिस जन्मैबाट एउटा लक्ष बोकेर आएको हुन्छ त्यो हो मृत्यु्। तर हामि बिच बाटोमा फगत अल्झिन्छौ र आफ्नो लक्ष बिर्सिन्छौ अनि मर्नु पर्ने कुरा कयौ पटक बिर्सन्छौ। अन्याय गर्छौ, पाप गर्छौ र सान्सारिक्तामा रुमलिन्छौ। जिबनको अन्तिम अन्तिम तिर जब पुग्छौ तब हामिलाई मृत्युको आभाष हुन्छ, आफूले गरेका पापहरुको बोध हुन्छ र पाप मोचनका खातिर तिर्थ बर्तमा लाग्छौ। तर कयौ पटक ठिला भइसकेको हुन्छ। जे होस राम्रो र जिबन्त कुरालाइ उठाउनु भयो। र जिबनको बोध गराउनु भयो। धन्याबाद हे तपाईलाई।
जीवन यथार्थलाई सुन्दर शैलीमा कवितामा प्रस्तुत गर्नु भएको छ धाईबाजीले ... फोटोको सुन्दरतालाई अलिकति नि तल नहुने गरि रचिएको छ कविता.... मलाई एकदमै मनपर्यो...
तर अहिले सम्म माइ संसारमा प्रथम चुनिएको कविताको स्तर हेर्दा ... उत्कृष्ट कविता छान्ने परिपाटी, आधार र निर्णयाकको क्षमता नि एक हद सम्म छर्लंग हुन्छ... त्यसैले यो कविताले कस्तो स्थान हाँसिल गर्ला म भन्न सक्दिन...
यो चाहिं पक्का हो... माइ संसारमा जे जस्तो निर्णय भए पनि ... यो कविता उत्कृष्ट छ...